विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतिले… – AB Sansar
विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतिले…
October 5, 2020 adminLeaveaComment on विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतिले…
काठमाडौं । माया र यु’द्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका छौ । यो बीचमा अहिले माया प्रेम सम्बन्धि एउटा घटना बाहिर आएको छ । भएको के भने, एक महिलाले विवाहको एक वर्षपछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने सोच बनाएकी छिन् । सम्बन्धविच्छेद किन गर्न चाहिन् ? यसको कारण भने निकै रोचक छ । उनका अनुसार उनलाई श्रीमानले अत्यधिक माया गर्ने, कहिले झगडा नगर्ने भएकाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेकी हुन् । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Breaking – यो मितिदेखी देशैभरका सम्पुर्ण कार्यालयहरु बन्द गर्ने सरकारको तयारी !
जीवनकालमा शंका गर्ने ब्यक्तीलाई कहिल्यै शान्ति मिल्दैन
January 14, 2021 Ab-संसार